के तपाई चस्माको सौखिन हुनुहुन्छ ? यसरी चिन्नुहोस् चस्माको ‘क्वालिटी’ - Everest Dainik - News from Nepal
के तपाई चस्माको सौखिन हुनुहुन्छ ? यसरी चिन्नुहोस् चस्माको ‘क्वालिटी’
प्रदुषणबाट बच्न राजधानीमा चस्मा अनिवार्यजस्तै बनेको छ । तर, आजकल चस्मा प्रदुषण रोक्नमात्रै लगाइन्न । देशका विभिन्न सहरबजारमा घाम, धुलो धुवाबाट बच्न तथा फेसनेबल देखिनका लागि चस्मा अनिवार्य जस्तै बनेको छ । तर, रंग, फ्रेम र डिजाईन मात्र हेरेर प्रयोग गरिने चस्मा आँखाका लागि उल्टै जोखिम बन्ने गरेको छ ।
बजारमा ८० रुपैयाँदेखि ३० हजारसम्मका चश्मा पाइन्छन् । नेपाली बजारमा सबैभन्दा बढी सनग्लास चीनबाट आउँछन् । चस्मा कस्तो भन्ने कुरा हेर्नुभन्दा पनि नयाँ डिजाईन तथा आफुलाई मन पर्ने कलर पाउने वित्तिकै चस्मा किनिहाल्ने प्रवृति छ हामीमा । आँखा निकै संवेदनशिल अंग भएकाले परामर्श बिना आफूखुशी चस्माको प्रयोग गर्दा मोतिबिन्दु, आँखाको लेन्स र पर्दामा असर पुग्नसक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
आँखाको सुरक्षा र आरामका लागि प्रयोग गरिने चस्मामा सुर्यको पराबैजनी विकिरण रोक्ने लेन्सको प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ । चस्मामा प्रतिबिम्बित प्रकाश रोक्ने पोलोराइज पनि अति आवश्यक हुन्छ । तर, बजारमा पाईने धेरै चस्मा प्लास्टिका हुने गर्छन । धेरै मात्रामा प्रकाश लिने यस्ता चस्माले विकिरण रोक्न सक्दैनन् ।
चस्माको लेन्स मात्र होईन, रंगमा पनि ध्यान दिनुपर्ने नेत्र विशेषज्ञ बताउछन । धेरै गाढा र अध्यारो चस्माले खुल्ला आँखाले भन्दा बढि विकिरण सिधै आखाभित्र पुर्याउने भएकाले घातक हुने चिकित्सक बताउछन् । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार, सूर्यको विकिरण रोक्नसक्ने चस्मा प्रयोग गरे संभावित जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।